Qaramada Midoobay oo u codeysay in 1,000 askari la dhimo ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQaramada Midoobay oo u codeysay in 1,000 askari la dhimo ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya
June 1, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidamada AMISOM. [Sawir Hore]
New York-(Puntland Mirror) Qaramada Midoobay ayaa si guud isugu raacday Jimcadii qaraar ah in la dhimo 1,000 askari oo katirsan ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya.
Qorshahaan ayaa qayb ka ah dadaalka dheer ee kala-guurka ah ee lagu doonayo in lagu abuuro lana kobciyo ciidamada Soomaaliya.
Bisha Febaraayo ee sanadka 2020 ayaa la dhimi doonaa ciidamada iyada oo AMISOM laga dhigayo 19,626 askari.
Qorshaha kala-guurka ah ayaa la bilaabay sanadkii 2017 waxaana la qorsheeyay in si rasmi ah ciidamada Soomaaliya ay masuuliyada ula wareegaan sanadka 2021.
AMISOM ayaa Soomaaliya timid sanadkii 2007 iyada oo ujeedadu ahayd sidii loo sameyn lahaa howlgalo nabad ilaalin ah. Wadamada ciidamada ku tabarucay ayaa waxaa kamid ah Burundi, Uganda, Djibouti Ethiopia iyo Kenya.
December 22, 2018 Midowga Afrika oo ka codsaday Burundi in ay dhinto 1,000 kamid ah ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya
Wefdi wasiiro ah oo ka socda dowladda federaalka iyo madaxweynaha Puntland oo kulan ku yeeshay Boosaaso
Boosaaso-(Puntland Mirror) Wefdi wasiiro ah oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wadahadalo kula yeeshay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni gudaha magaalada Bosaaso. Wefdiga oo ay kamidyihiin wasiirka arrimaha dibada, wasiirka qorshaynta iyo wasiirka kalluumaysiga [...]
Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyadda 2019
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah ansixiyay miisaaniyadda 2019-ka. Kadib labo maalmood oo ka doodis ah 174 xildhibaan oo kulanka soo xaadiray ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay miisaaniyada. Miisaaniyada [...]